Burma Partnership » Widespread Systematically Prepared Advance Voting Determined Winners
This report was produced by Burma International News (BNI) and provides information and comprehensive analysis of Election Day and other related events. Detailed issues include framework of Election preparation, Parliaments, Constituencies, Political Parties, Election Campaigning, Vote Buying, Polling Stations, Intimidations, and Complaints.
Some of the Election flaws brought up in the report are voter lack of election education, restriction on campaigning, unclear statement of number of eligible voters, intimidation of polling station officials etc. The document also provides evidence of violation of election laws.
ဤအစီရင်ခံစာကို Burma International News (BNI) မှ ထုတ်ပြန်ထားပြီး ရွေးကောက်ပွဲနေ့ အဖြစ်အပျက်များ အပါအဝင် အခြားစပ်လျဉ်းသော အချက်အလက်များကို စုစည်းတင်ပြထားသည်။ အစီရင်ခံစာထဲတွင် အသေးစိတ် ဆွေးနွေးထားသော အကြောင်းအရာများမှာ ရွေးကောက်ပွဲနေ့ ဖြစ်စဉ်နှင့် ရွေးကောက်ပွဲ အခင်းအကျင်း၊ လွတ်တော်များနှင့် မဲဆန္ဒနယ်မြေများ၊ ရွေးကောက်ပွဲမဲဆွယ်မှု၊ နိုင်ငံရေးပါတီများ၊ မဲဝယ်မှုများ၊ မဲရုံများ၊ ခြိမ်းခြောက်အကြပ်ကိုင်မှုများနှင့် အခြားအကြောင်းအရာများ ပါဝင်သည်။
အစီရင်ခံစာထဲတွင် ဖေါ်ပြထားသည့် အချို့သော ရွေးကောက်ပွဲ အားနည်းချက်များမှာ တိကျရှင်းလင်းသည့် မဲဆ္ဒရှင်များ၏ စာရင်းမရှိခြင်း၊ ပြည်သူများမှ မည်သို့ မဲပေးရမည်ကို မသိရှိခြင်း၊ ပါတီများ၏ စည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှုများကို ကန့်သတ်ထားခြင်း၊ မဲရုံမှူးများ၏ ဖိအားပေးခြိမ်းခြောက်မှုများ စသည်တို့ဖြစ်သည်။ အစီရင်ခံစာထဲတွင် ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေ ချိုးဖောက်မှုများအပါ် သက်သေအထောက်အထား များနှင့်တကွ ဖေါ်ပြထားသည်။
Tags: 2010 Elections, Burmese, Constituencies, Election Campaigning, Parliament, Political Parties, Vote Buying